UZandi Khumalo usengene kumasikandi - Ilanga News
Home Izindaba UZandi Khumalo usengene kumasikandi
UZANDI Khumalo osengene nasemculweni kamasikandi esebenzisana noMaqhinga Hadebe.
SIFUNA ubuciko baso bungavaleleki ebhokisini isiphalaphala se-Afro soul esithathe ingoma yomculi kamasikandi sayenza kabusha ngokwesigqi sabesifazane.
UZandi Khumalo waseNtinini, eNquthu, ongudadewabo kaKelly Khumalo, uthathe ingoma kaMaqhinga Hadebe ethi “X-yami” edume kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi kwabesifazane ngoba ethi ufuna ukunyathela nakumaskandi ukuze ikhono lakhe linganciki ohlotsheni olulodwa lomculo.
Le ngoma uMaqhinga wayikhipha ngo-2018 kodwa yangalithola ithuba lokugqama emisakazweni emikhulu, ivuka ogqokweni kulo nyaka njengoba uZandi eseyicula ngephimbo lakhe washintsha nesihloko sayo sathi “Ngijabule Kabi”.
UZandi utshele ILANGA ukuthi kusukela ekukhuleni kwakhe ubewuthanda umasikandi elalela uShwi noMtekhala nabanye abaculi. Uthi waxhumana nehhovisi lakhe walitshela ngesifiso sakhe nokuthi uthanda isigqi seShabalala Rhythm.
“Ihhovisi lingitholele uMaqhinga ngoba vele usebenzisana nayo, wathi kunengoma yakhe angathanda ukunginikeza yona ngiyenze ngephimbo lami ukuze abone ukuthi umuntu wesifazane angayenza kanjani.
“Sisebenze kahle wangicathulisa, kodwa ezinye izinhlamvu ngizikhiphile engomeni nakuba ifana,” kusho uZandi. Uthi i-Afro Soul yiyona ayithanda kakhulu ngoba imthinta enhliziyweni, kodwa ziningi izinhlobo zomculo akwazi ukuzenza.
UMaqhinga utshele leli phephandaba ukuthi ubone kukuhle le ngoma anganqwahi nayo ngoba bese kubonakele ukuthi idla lubi kwezokuxhumana, iyathandwa.
“Le ngoma ithandwa kakhulu ngabantu besifazane, uma kukhona owesifazane obone kukuhle ukuba ayithathe akhulumele abanye besifazane, kuhle lokho,” kusho uMaqhinga. Le ngoma kaZandi iphrojuswe nguyena ngqo uMaqhinga, kanti isiyatholakala ezitolo zomculo online.
Previous articleUdunge umcimbi ezibulala nengoduso eyisola ngokujola
Next articleSelifikile kuleli ibandla likaSathane